Location: musha » Kutumira » nhandare yendege » Mufambiro Wemufambi Wenhandare Yendege yeFrankfurt Unobva Wadzoka Zvinooneka Muhafu Yekupedzisira Yegore
Fraport Traffic Figures 2021: Huwandu hwevatyairi veFRA neFraport's Boka nhandare dzendege pasirese dzichiri pasi pe pre-dambudziko chiyero - Frankfurt Airport inowana rekodhi nyowani yegore rose yekutakura zvinhu.
Frankfurt Airport (FRA) yakatambira vafambi vanosvika 24.8 miriyoni muna 2021 - kuwedzera kwe32.2 muzana zvichienzaniswa ne2020 apo nhamba dzepasi rose dzakadzikira mukati mekubuda kwedenda re coronavirus. Mushure mekuvharwa kwechitatu muna Chivabvu 2021, kurerutswa kwezvirambidzo zvekufamba zvakakonzera kupora kunoonekwa mukudiwa kwekufamba nendege. Kunyanya, maitiro akanaka aya aitungamirirwa neEuropean holiday traffic munguva yezhizha. Kutanga mumatsutso, nhamba dzevatyairi dzakawedzerwawo neintercontinental traffic zvakare. Kudzoreredza kwakadzikira mukupera kwa2021, nekuda kwekubuda kweiyo hutachiona hutsva. Kuenzaniswa neiyo 2019 pre-dambudziko level, huwandu hwevatyairi veFRA ye2021 hwakanga huchiri pasi 64.8 muzana. 1
Vachitaura nezvehuwandu hwemigwagwa, mukuru weFraport AG, Dr. Stefan Schulte, akati: "Mugore ra2021, denda reCovid-19 rakaramba richikanganisa zvakanyanya paFrankfurt Airport. Kufamba kwevapfuuri kwakadzora zvishoma nezvishoma mukufamba kwegore - kunyangwe kukwira zvakapetwa katatu munguva yaKubvumbi-kusvika-Zvita 2021 zvichienzaniswa ne2020. Asi isu tichiri kure nematanho epre-denda a2019. Cargo traffic, zvakasiyana, yakaona zvakanyanya. kukura kwakanaka muna 2021. Mavhoriyamu ekutakura nendege muFrankfurt akatosvika parekodhi nyowani yegore, zvisinei nekuperevedza kuri kuramba kuchiitika kwedumbu rekugona mundege dzevatakuri uye mamwe matambudziko. Izvi zvinosimbisa basa redu seimwe yenzvimbo dzinotakura zvinhu muEurope.”
Kufamba kwendege kweFRA muna 2021 kwakakwira ne23.4 muzana gore-pa-gore kusvika 261,927 kutora uye kumhara (2019 kuenzanisa: pasi 49.0 muzana). Huremu hwakaunganidzwa kana maMTOWs akakura ne18.9 muzana gore negore kusvika pamamiriyoni gumi nenomwe nemazana manomwe nenomwe (17.7 kuenzanisa: pasi ne2019 muzana).
Kufambiswa kwekutakura zvinhu, kunosanganisira kutakurwa kwendege uye nendege, kwakawedzera zvakanyanya ne18.7 muzana gore negore kusvika pamamiriyoni mazana maviri nemazana matatu nemakumi maviri nematatu emamiriyoni - iro vhoriyamu yepamusoro-soro yati yambowanikwa munhoroondo yeFrankfurt Airport (kuenzanisa 2.32: kusvika 2019 muzana). Kuputswa kwezvikamu zviviri zvekutakura zvinhu kunoratidza kuti kutakurwa nendege ndiko kwaive mutyairi mukuru kumashure kwekukura uku, nepo tsamba yendege yakaramba ichikanganiswa nekushaikwa kwedumbu mundege inotakura vanhu.
Zvita 2021 akamisikidzwa neanopikisa maitiro
Vafambi vanosvika miriyoni mazana maviri nemazana manomwe vakafamba neFrankfurt Airport muna Zvita 2.7. Izvi zvakaenzana nekukwira kwe2021 muzana pagore-pagore, zvichienzaniswa neasina kusimba muna Zvita 204.6. Kudiwa kwekufamba kwese muna Zvita 2020 kwakaderedzwa nekukwira kwehuwandu hwehutachiona uye zvirambidzo zvitsva zvekufamba zvakaiswa. pakati pekupararira kweiyo Omicron musiyano. Nekudaro, nekuda kwekukura kwetraffic pakati pemakondinendi uye kufamba kwezororo panguva yeKisimusi, traffic yevafambi yakatsigira kupora kwakaitika kubva muna Chivabvu 2021. Mumwedzi wekutaura, nhamba dzevatakuri veFRA dzakaramba dzichikwira kusvika inopfuura hafu yedanho rekutanga dambudziko rakanyorwa muna Zvita 2021. (pasi pe2019 muzana).
Ne 27,951 kutora uye kumhara, kufamba kwendege kuFrankfurt kwakakwira 105.1 muzana gore negore muna Zvita 2021 (Zvita 2019 kuenzanisa: pasi 23.7 muzana). Yakaunganidzwa MTOWs yakawedzera ne65.4 muzana kusvika miriyoni 1.8 metric toni (Zvita 2019 kuenzanisa: pasi ne23.2 muzana).
Kutakura kweFRA (airfreight + airmail) kwakakura ne6.2 muzana gore negore kusvika kumatani zana nemakumi mapfumbamwe nenomwe muna Zvita 197,100 - nekudaro ichisvika vhoriyamu yepamusoro yepamwedzi kubva muna Zvita 2021 (Zvita 2007 kuenzanisa: kusvika 2019 muzana).
Nezve tarisiro yetraffic yegore ra2022, CEO Schulte akatsanangura kuti: “Mamiriro ebhizinesi redu acharamba akashata uye aine simba muna 2022. Panguva ino, hapana anogona kufanotaura nekuvimbika kuti denda richashanduka sei mumwedzi iri kuuya. Izvo zvine hukama - uye kazhinji zvisingaenderane - zvirambidzo zvekufamba zvinoramba zvichiisa dambudziko rinorema paindasitiri yendege. Pasinei nokusava nechokwadi uku, tiri kuona gore riri mberi rine tariro. Tiri kutarisira kuti kudiwa kwekufamba nendege kuchadzoka zvakare muchirimo. ”
Mufananidzo wakasanganiswa weFraport's international portfolio
Fraport Group nhandare dzendege kutenderera pasirese dzakaratidza mufananidzo wakasanganiswa mukati megore ra2021. Nzvimbo dzese dzepasirese dzakarekodha kukura kwakasiyana siyana zvichienzaniswa neiyo isina simba 2020 referensi gore, kunze kweXi'an yekuChina. Traffic yakadzoka nekukurumidza zvakanyanya panhandare dzendege dzakatarisana nekushanya, kunyanya mumwaka wezhizha. Zvichienzaniswa neiyo pre-dambudziko nhanho ye2019, dzimwe nhandare dzendege dzeBoka munhandare yepasirese dzakaramba dzichitaura kuderera kukuru.
PaSlovenia's Ljubljana Airport (LJU), traffic muna 2021 yakakwira ne46.4 muzana kusvika 421,934 vafambi gore-negore (2019 kuenzanisa: pasi 75.5 muzana). Muna Zvita 2021, LJU yakagamuchira 45,262 vafambi (Zvita 2019 kuenzanisa: pasi 47.1 muzana). Nhandare dzendege dzeBrazil muFortaleza (FOR) nePorto Alegre (POA) dzakasanganiswa dzakabatira vanhu vangangosvika miriyoni 8.8 muna 2021, kukwira ne31.2 muzana kubva 2020 (2019 kuenzanisa: pasi ne43.2 muzana). Iyo yaDecember 2021 traffic volume yevose FOR nePOA yakasvika vangangosvika miriyoni miriyoni vafambi (Zvita 1.2 kuenzanisa: pasi ne2019 muzana). Traffic paLima Airport yePeru (LIM) yakakura kusvika kune vamwe 19.9 miriyoni vafambi (kuenzanisa 10.8: pasi 2019 muzana). LIM yakagamuchira vangangosvika miriyoni 54.2 vafambi muna Zvita 1.3 (Zvita 2021 kuenzanisa: pasi 2019 muzana).
Fraport's gumi nemana nhandare dzendege dzeGreece dzakabatsirwa nekufambazve kwezororo muna 14. Zvichienzaniswa ne2021, traffic yakasvetuka nepamusoro pezana kusvika kune vangangoita 2020 miriyoni vafambi (100 kuenzanisa: pasi 17.4 muzana). Muna Zvita 2019, nhandare dzendege dzeGreek dzakagamuchira vanhu vanosvika mazana mashanu nemakumi matanhatu nemakumi matanhatu nevaviri (42.2 kuenzanisa: pasi ne2021 muzana). Pamhenderekedzo yeGungwa Dzvuku yeBulgaria, nhandare dzeTwin Star dzeBurgas (BOJ) neVarna (VAR) dzakawana kuwedzera kwe519,664% kusvika kune vangangoita 2019 miriyoni vafambi (kuenzanisa 25.4: pasi ne87.8 muzana). BOJ neVAR pamwe chete vakanyoresa vanhu vanosvika 2.0 muna Zvita 2019 (kuenzanisa kwaZvita 60.5: pasi ne66,474 muzana).
Iine vamwe 22.0 miriyoni vafambi muna 2021, Turkey's Antalya Airport (AYT) yakanyora kuwedzera kwe100 muzana zvichienzaniswa ne2020 (2019 kuenzanisa: pasi 38.2 muzana). Pano zvakare, traffic yevashanyi yakaita kunyanya kutaridzika uye kwakasimba mumwedzi yezhizha. Muna Zvita 2021, AYT yakagamuchira 663,309 vafambi (Zvita 2019 kuenzanisa: pasi ne23.9 muzana).
KuRussia Pulkovo Airport (LED) muSt. LED yakakwezva vafambi vanosvika miriyoni imwe nemazana mana mumwedzi waZvita 64.8, zvichimiririra kuwedzera kwe18.0 muzana kana mwedzi iwoyo muna 2019 (kuenzanisa 7.9: kusvika 1.4 muzana).
KuChina's Xi'an Airport (XIY), kudzoreredzwa kwemotokari mukati megore ra2021 kwakadzika zvakanyanya mukupera kwegore - nekuda kwekuvharika kweCovid-19 mukati meguta repakati reChinese.
Saka, traffic yeXIY yakasvika 30.1 miriyoni vafambi kwegore rose re2021, inomiririra kuderera kwe2.9 muzana zvichienzaniswa ne2020. (2019 kuenzanisa: pasi 36.1 muzana). Muna Zvita 2021, traffic paXIY yakaderera ne72.0 muzana kusvika 897,960 vafambi (Zvita 2019 kuenzanisa: pasi 76.2 muzana)
nhandare yendege Antalya Gungwa Dema Burgas muFrankfurt Frankfurt Airport Fraport Lima Ljubljana Mutakuri Porto Porto Alegre